Qeybta:Aaladda1 min akhris
Haweenka ku jira Tamarta: Kooxaha Nabadgelyada Nadiifinta Nadiifinta Wareysiyada Kate Wolford
By Kate Wolford, waxaana soo saaray CERT
Waraysiga soo socda ayaa markii hore la daabacay Nadiifinta 'Kooxaha Caawinta Tamarta' (CERTs) blog.
Nadiifinta Qaybaha Waxtarka Tamarta: Miyaad nooga sheegi kartaa waxoogaa ku saabsan waxa aad ku sameyso adduunka tamarta ee Minnesota?
Kate Wolford oo ka hadlaysa Shir-hawleedka Caalamiga ah ee Cimilada.
Kate Wolford: Waxaan u shaqeeyaa madaxweyne ka tirsan machadka McKnight Foundation, oo ah saldhiga qoyska Minnesota. Mid ka mid ah hadafyadeenu waa in la kobciyo hoggaanka dhexe si loo xoojiyo u gudubka mustaqbal hoose oo kaarboon. Waxaan taageernaa siyaasadaha ku dhiirrigeliya soo-kobcinta suuqa iyo korsashada cabbiraadda tallaabooyinka lagu yareynayo gaasaska qulqulka gaaska, tusaale ahaan wax-ku-oolnimada tamarta iyo cusbooneysiinta. Waxaan sidoo kale taageernaa barnaamijyada sida CERTyada taas oo keenaysa faa'iidooyinka la taaban karo iyo kharashka kaydka ee tamarta tamarta iyo tamar nadiif ah nolol maalmeedka dadka.
CERTyada: Sidee ayaad ku heshay shaqadan?
Kate Wolford: Ka hor McKnight, waxaan ku hawlanaa shaqada caalamiga ah ee is-gaadhsiinta yareynta saboolnimada iyo maareynta khayraadka dabiiciga ah. Waxaan inta badan ka shaqeynayay dhulka miyiga ah ee aan laheyn koronto-waa mid xiiso leh in la arko in badan oo ka mid ah meelahaas oo ka fogaanaya tamarta qoraxda. Markii aan ku biiray aasaaska, waxaan la shaqeynayay gudigeena maamulayaasha si aan u sii wanaajinno fahamkeena sayniska cimilada iyo taageerida xalka dhaqaale ee ka ilaaliya meeshanada jiilalka mustaqbalka. Waxaannu daba galnaa yoolalka decarbonization sida maalgeliye hay'adeed iyo sidoo kale deeq-bixiye.
"Dhaqaalaha waagii hore waxaa lagu dhisay fiilo fosil ah, laakiin dhaqaalaha mustaqbalku waa mid nadiif ah, dib loo cusbooneysiin karo, iyo dib-u-bogsiiye." -KADO QAABKA, MADAXWEYNAHA, HORUMARKA DIBADDA
CERTyada: Waa maxay maalinta caadiga ah ee adiga kuu eg?
Kate Wolford: Waxaan leenahay barnaamijyo kala duwan oo kala duwan si aan u helo isku kalsoonida arimaha badan. Maalin kasta, oo laga yaabo inay ka soo jiido gaadiidka korontada si ay u xidhaan fursadaha kala duwan ee waxbarasho ee horumarka ugu dambeeyay ee cilmi baarista neuroscience. Doorashadaydu waa in la hubiyo in la isku waafajiyo qiyamadayada iyo in aan sare u qaadno isticmaalka dhammaan kheyraadkeena si aan u horumarino yoolalka iyo faa'iidada guud.
CERTyada: Waa maxay qaybaha ugu wanaagsan iyo ugu xun ee shaqadaada?
Baska koowaad ee dugsiga korontada ee Midwest ee Lakeville, MN.
Credit: Ururka Dakota Electric
Kate Wolford: Qeybta ugu Wanaagsan: Qeybta ugu fiican waxay si wadajir ah ula shaqeyneysaa ganacsiga, muwaadiniinta, iyo qaybaha guud ee qaar ka mid ah caqabadaha iyo fursadaha ugu adag ee bulshada. Hoggaaminta mareegaha ee Minnesota ayaa abuuray sharcigeena hoggaanka sare ee "Generation Energy Energy Act 2007" iyo siyaasadaha kale ee siyaasadda suuqa. Sii hore u sii soco. Minnesota, shaqooyinka dib u cusboonaysiinta waxay kor u kaceen 15% tan iyo sannadkii 2015 iyo tayada tamarta ayaa gacan ka gaysatay magaalooyinka gobolka oo dhan lacag kayd ah. Halkii ay ka neefsan lahaayeen qashinka baska dugsiga, carruurta ku nool Lakeville, MN waxay raacaan baska korontada ku shaqeeya. Natiijadu waa hawo nadiif ah iyo kharashyada hawlgalka hooseeya. Hadda ka feker haddii ay taasi isku dhafan tahay dugsi kasta oo ku yaal gobolka. Tani waa mustaqbalka-su'aasha noogu jirto waa inaan hogaaminaa ama aan joogno halkaas.
Qaybta ugu xun: Marka Minnesota hogaaminayso, waxay sabab u tahay pragmatism, ma aha dulqaadka. Sidaa daraadeed waxaan ka werwersanahay waddanka ka dib isbedelka qaran ee dabacsanaanta siyaasadeed iyo cilaaqaad siyaasadeed, oo ay ku kicinayaan qoryaha iyo qaniinyada dhawaaqa 'aqbaarta maqalka' ee warbaahinta bulshada iyo xoogagga kale ee aan hadda bilaabayno inaan fahamno. Taasi waxay ka dhigeysaa mid aad u adag in la dhibaateeyo xal macquul ah.
CERTyada: Ka waran shaqadaada ayaa kugu dhiirigelisa?
Kate Wolford: Inaad ku hareeraysan tahay waxqabad hal abuur leh, xiiso leh, shaqaale ujeedo leh iyo deeq bixiyayaal ayaa igu dhiirrigeliya maalin kasta. Marka laga eego isbedelka tamarta nadiifinta, codkani waa mid aad u sarreeya, laakiin waxa la iigu dhiirrigeliyaa curfaha qiimaha! Dhab ahaan, horumarinta tiknoolajiyada iyo kharashyada degdega ah ee qorraxda iyo dabaysha, dib u cusbooneysiinta aan la daboolin ayaa hadda ka jaban dhuxusha iyo gaaska dabiiciga ah. Siyaasadaha codka waxay u diri karaan calaamadaha saxda ah hirarka mustaqbalka ee ganacsiga iyo miisaanka.
CERTyada: Talo noocee ah ayaad u leedahay dumarka ka fekeraya inay ka shaqeeyaan tamar?
Kate Wolford: Dhaqaalaha waagii hore waxaa lagu dhisay fiilo fosil ah, laakiin dhaqaalaha mustaqbalku waa mid nadiif ah, dib loo cusbooneysiin karo, iyo dib-u-bogsiiye. Waxaan ku faraxsanahay inaan haysto gabdhaha da'da jaamacadda oo doonaya in ay noqdaan injineer si loo balaariyo tamarta nadiifka ah ee caalamka. Waxaad ka mid noqon kartaa isbeddelkan xiisaha leh ee ganacsiga, siyaasadda, iyo ururada bulshada.